Security Assistant | Shwe Gandamar International Trading ﻿
22.5.2019, Full time , Retail / Wholesale
•	နေ့ /ည အဆိုင်းဖြင့် အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်း၊ မီးသတ်သင်တန်း (တက်ဖူးသူဦးစားပေးမည်)
•	ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး၊ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၊ အရည်အချင်း ပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေးမည်။
for Gandamar Wholesale (Yangon)
•	အသက် (၂၀) နှစ်နှင့်အထက် ဖြစ်ရမည်။
•	ပညာအရည်အချင်း ခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။ (ကျောင်းဆက်မတက်သူ ဦးစားပေးမည်)
Work location G Flr, Gandamar Wholesales Center,Mayangone,Yangon Region
Company Industry: Security Assistant
Job posted: 22/5/2019
54 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Be flexibility and honest.
•	နေ့/ညအဆိုငျးဖွငျ့ တာဝနျထမျးဆောငျနိုငျရမညျ။
•	Maintain and enhance organization’s human resources. •	Develop and implement company policies and procedures. •	•	Monitoring compliance of labor laws. •	Manage Recruitment and Selection process. •	Develop and execute new employee orientation. •	Organize the performance appraisal for the probation staffs. •	Identify and assess future and current training needs for all department cooperation with line managers. •	Conduct monthly payroll and manage compensation and benefits process. •	Conduct quarterly and yearly ...
•	Good team player and able to work independently.
•	Greet and welcome visitors as soon as they arrive at the office. •	Direct visitors to the appropriate person and office. •	Answer, screen and forward incoming phone calls and some general administrative tasks.
87 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	တာဝနျရှိသူမှ ၀ယျယူ/မှာယူထားသော ကုနျပစ်စညျးမြားအား ကားပျေါသို့ တငျ/ခြ ရမညျ။ •	ကားပျေါတှငျ သယျဆောငျလာသော ကုနျပစ်စညျးမြားအား စနဈတကထြားသိုကာ ဂိုဒေါငျတှငျ ပွနျလညျအပျနှံရမညျ။ •	ခမြှတျထားသော စညျးမဉြ� ...
•	မိမိတာဝနျယူထားသော မုနျ့အမြိုးအစားအားလုံးအား အခြိနျမှီရောငျးခနြိုငျရနျ ထုတျလုပျပေးရမညျ။ •	မိမိထုတျလုပျသော မုနျ့မြားအား စားခငျြစဖှယျဖွဈစရေနျ၊အရာသာကောငျးမှနျစရေနျ၊ ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျမှုရ ...
•	ရုပျရညျပွပွေဈပွီး စကားပွောဆို ခြိုသာရမညျ။
•	Good personality and communication skill. •	Experience in Trading & Supermarket field is preferable. •	Good Computer Literacy in Microsoft and accounting Software. •	Able to work under pressure and can handle the task well.
•	Well Knowledge on electrical fields such as generator, elevator, Air Con servicing, Building General Maintenance, Audio.
251 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Excellent communication skills, team work skills, problem solving and organizational skills. •	Positive working attitude and keen to work to meet dead line. •	Ability to travel to Branches
•	နေ့ /ည အဆိုင်းဖြင့် အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်း၊ မီးသတ်သင်တန်း (တက်ဖူးသူဦးစားပေးမည်) •	ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပ ...
•	အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများအား ကောာင်းစွာစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	နေ့/ ည အဆိုင်းဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုတာဝန်ထမ်းဆောင� ...
Security Assistant Security & Safety jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Shwe Gandamar International Trading Security & Safety jobs Security & Safety jobs Security Assistant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(10102)
Work in Yangon Region(2147)
Work in Mandalay Region(787)
Work in Mandalay City(220)
Dagon Glory Co., Ltd.(818)
YOUNG INVESTMENT GROUP CO., LT...(69)
Assistant Manager (Business Analyst) IT
Market Research Senior Assistant
Personal Assistant to Thai Director (English - Thai) M/F (1)
Myanmar Lighting (IPP) Co.,Ltd
Tah Moe Hnye Group Investment & Development Co., Ltd. (TMH)
Personal Assistant to Thai Director (English - Thai)
Ayeyarwady Region3Days
Chief Security (Sergeant)